Admin Manager | Uniqe Paragon Inl Trading ﻿
24.5.2019, Full time , Trading
Company: Uniqe Paragon Inl Trading
လူကြီးမင်းတို့၏ Construction မှ Project တိုင်းအတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဈေးသက်သာမည့် အုတ် ကိုရှာနေပါသလား?
ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရှင်များပူးပေါင်းပြီး ကျောက်မီးသွေးနှင့် မြေကြီးရောနှောကာ မီးဖုတ် ထုတ်လုပ်ထားသော အရည်အသွေးမှာနံပါတ် (1) ခိုင်ခံ့သပ်ရပ်ရေစိမ်ခံသော MGC အမှတ်တံဆိပ်ပါ စက်အုတ် များရှိရာသို့အပြေးလေးလာခဲ့လိုက်ပါ....
MGC ရှစ်ပေါက်စက်အုတ် နှင့် အုတ်ပိတ်များအား ဆိုဒ်အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်.....Trading
•	တက္ကသိုလ်မှ စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့ရရှိရမည်။
•	စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ၃ နှစ် အထက်ရှိရမည်။
Work location အမှတ် ၂၀၂ ၊ဒုတိယထပ် ၊အောင်ဇေယျကွန်ဒို၊သိပ္ပံလမ်း၊အလုံ မြို့နယ်၊(ဆင်မင်းဈေးအနီး)
Job posted: 24/5/2019
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ များကိုကျွမ်းကျင်ရမည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ Construction မှ Project တိုင်းအတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဈေးသက်သာမည့် အုတ် ကိုရှာနေပါသလား? ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရှင်များပူးပေါင်းပြီး ကျောက်မီးသွေးနှင့် မြေကြီးရောနှောကာ မီးဖုတ် ထုတ်လုပ်ထားသော အရည်အသွေးမှာနံပါတ် (1) ခိုင်ခံ့သပ်ရပ်ရေစိမ်ခံသော MGC အမှတ်တံဆိပ်ပါ စက်အုတ် များရှိရာသို့အပြေးလေးလာခဲ့လိုက်ပါ.... MGC ရှစ်ပေါက်စက်အုတ် နှင့် အုတ်ပိတ်များအား ဆိုဒ်အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်.....
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အရက်၊ကွမ်း ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
Admin Manager Admin, Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Unique Paragon International Trading Co., Ltd. Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Admin Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(8028)